November 8, 2017 - TV Annapurna
यी पाँच राशी भएका व्यक्तिहरु जो पागलपनको हदसम्म प्रेम गर्छन्
यो संसारका हरेक व्यक्ति एकजस्ता हुँदैनन् । कसैमा केही कुरा विशेष हुन्छ भने कसैमा केही । कसैको केही विशेषता हुन्छ भने कसैमा केही कमी हुन्छ । तर के तपाईंलाई थाहा छ, राशीका आधारमा तपार्ईं यी भिन्न भिन्न मानिसहरुबिच केही समानता अवश्य पनि देख्नु सक्नुहुन्छ । तपाईंको राशीः भनाईको अर्थ यो हो कि राशीको आधारमा केही यस्ता कुरा छन् जसमा स्वभाव, चरित्र, रुची, अरुची आदि कुराहरु समावेश हुन्छन् । उदाहरणका लागि यदि तपाईंको राशी कसैसँग मेल खान्छ भने तपाईं यो बुझ्नुहोस् कि केही कुरामा तपाईं र ती व्यक्तिलाई एक समान भन्न…
सावधान ! यी ९ प्रकारका खाना धेरै खानुभयो भने तपाईको तालु चाँडै खुईलिन्छ
कपाल समयपूर्व नै झर्नु आजकाल सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य सम्बन्धमध्येको एक हो । कपाल झर्नुका पछाडि धेरै कारण हुनसक्छ जसमा रोग र बंशानुगतका साथै खानपिन पनि समावेश छन् । के खानाका कारण झर्छन् कपाल ? भारतकी हेयर र ब्यूटी एक्सपर्ट निक्की बाबाका अनुसार केही खानेकुरा धेरै खाँदा रगतमा बायोटिनको कमी हुन थाल्छ जसले कपालको जरामा रक्तसंचार कम हुने गर्दछ । यसकारण तिब्र गतीमा कपाल झर्ने गर्दछ । १. पेस्ट्रीज र केकः यसमा हुने मैदा र चीनिले एन्ड्रोजन हर्मोनको स्तर बढाउँछ । यसले तीब्र रुपमा कपाल झर्छ । २. तारेका खानेकुराः यसमा…
बलिउडको पछिल्लो चलचित्र गोलमाल अगेन व्यवसायिक रूपमा सफल भएको छ । निर्मातासहित वितरकले समेत पैसा कमाउन थालेको उक्त चलचित्रका लागि मुख्य कलाकार तथा निर्देशकले लिएको पारिश्रमिक हालै मात्र सार्वजनिक भएको छ । समाचारमा जनाइएअनुसार चलचित्रको मुख्य अभिनेता अजय देवगणले २५ करोड भा.रु. पारिश्रमिक लिएका छन् भने अभिनेत्री तब्बुले साढे २ करोड भा.रु. बुझेको बताइन्छ । अभिनेत्री परिणिति चोपडाले २ करोड भा.रु. पाएकी छिन् । चलचित्रका तीन अभिनेता तुषार कपूर, कुणाल खेमू तथा श्रेयस तलपडेले २–२ करोड भा.रु. पारिश्रमिकका रूपमा प्राप्त गरेका छन् ।
विराटनगर | राष्ट्रिय जनता पार्टी मोरङले प्रदेश नं १ को राजधानी विराटनगरलाई बनाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । सो पार्टीद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक मोहम्मद कादिरले आवश्यक पूर्वाधार भएकाले विराटनगर नै प्रादेशिक राजधानी हुनुपर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो । त्यस्तै पार्टी निर्णयविरुद्ध अन्य पार्टीबाट मोरङ क्षेत्र नं ४ को (ख) मा उम्मेदवारी दिएका श्रीराम कामतलगायत नसरुल, मियाँ, राधे कामल र कमलेस कामतलाई कारबाही गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । संयोजक कादिरले राजपाले १ नं प्रदेशमा अन्य कुनै पार्टीसँग तालमेल नगरेको बताउँदै संविधान संशोधन गर्न आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारलाई जनताले विजयी गराउने दाबी गर्नुभयो…
पोखरा | कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा कास्की क्षेत्र नं १ का उम्मेदवार यज्ञबहादुर थापाले संविधानको सफल कार्यान्वयन र राष्ट्रिय समृद्धि राष्ट्रको आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं ३० शिशुवामा निर्वाचन प्रचार प्रसार समितिको कार्यालयको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले वाम गठबन्धनका नाममा नेपाली जनताको लामो समयदेखिको संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक संविधानलाई नै उल्टाउने गरी भइरहेको षडयन्त्रप्रति आम नेपाली जनता गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो । “लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि काँग्रेसले जित्नु अपरिहार्य छ,” उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय साधन स्रोतको अधिकतम् उपयोगमार्फत पर्यटन, जलविद्युत्का साथै कृषिको आधुनिकीकरणका सम्भावनालाई…
धुलिखेल | टिपरको ठक्करबाट मृत्यु भएका बालकका परिवारलाई रु दश लाख क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएपछि अवरुद्ध अरनिको राजमार्ग आज अपराह्नबाट सञ्चालनमा आएको छ । पीडित पक्षसँग दश लाख क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएपछि राजमार्ग सञ्चालनमा आएको काभ्रेपलाञ्चोकका प्रहरी नायब उपरीक्षक महेन्द्रप्रसाद मरासिनीले बताउनुभयो । पीडित पक्षले दोषीलाई कारबाही र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गर्दै राजमार्ग अवरुद्ध गरेका थिए । पाँचखाल नगरपालिका–४ तामाघाटमा आज बिहान बा ४ ख ३२६८ नंको टिपरको ठक्करबाट पाँचखाल–९ का साढे दुई वर्षीय रामबहादुर कुँवरको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको थियो ।
घरको छतमाथी बन्यो सार्वजनिक सडक
चीनको एक पाँच तले घर यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । चिनिया सहर चोंगकिंगमा रहेको उक्त घरको छत कार चल्ने सडक बन्न पुगेको छ । तस्बिरमा छत माथिको सडकमा सवारी सहजै आवत जावत गरेको देख्न पाइन्छ । यतिबेला उक्त घरमाथि दुई लेनको सार्वजनिक सडक बनेको छ । सडको छेऊछाऊमा रुख विरुबा र केही पसलहरु पनि छन् । सोही घरको भुईं तल्लामा भने सपिङ शोरुम छन् । केही तलामा भने कार पार्किङ गरिएको छ । जनसंख्या निकै रहेको भिडभाडयुक्त चीनमा हिजोआज यो र यस्ता रमाइला कुराहरु हुनु सामान्यजस्तै भएको छ…
हेर्नुहोस् यि दम्पती जसले ७० बर्षको उमेरमा सन्तान जन्माए
बिहे गरेको केही वर्षभित्रैमा आमा बन्न महिलाहरू हतारिने गर्छन् । तर, भारतकी एउटी महिलाले बिहे गरेको ४६ वर्षपछि ७० वर्षको उमेरमा सन्तानलाई जन्म दिएकी छिन् । भारतकी दलजिन्दर कौर नाम गरेकी वृद्धाले जीवनको उत्तरार्धमा बच्चालाई जन्म दिएकी हुन् । यद्यपि, कौर आफू आमा पनि बन्न नसक्ने गरी वृद्धा भएकी छु भन्ने स्विकार्दिनन् । ‘अहिले पनि म आमा बन्न योग्य छु भन्ने प्रमाण हो यो बच्चा,’ बच्चालाई देखाउँदै उनले भनिन् । बाँझोपनको समस्याबाट ग्रस्त उनले भारतको हरियाणास्थित एउटा फर्टिलिटी क्लिनिकमा विगत दुई वर्षयता उपचार गराउँदै आएकी थिइन् । उपचारपछि उनी सन्तान…
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको मुकुण्डो लगाएर इटालीमा चोरी
चोरी गर्न चोरहरुले कस्तासम्मका तरिका अपनाउलान् भन्ने अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ रु इटालीका दुई चोरले चोरी गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको मास्कको सहारा लिएका छन् । डोनाल्ड ट्रम्पको अनुहारधारीले चोरी गरे पनि तिनलाई पक्रन प्रहरी सफल भएको छ । चोरलाई पक्रेपछि यो खबर संसारभर छाएको हो । उत्तरी इटालीमा गत जुलाई अन्तिम साता एक समारोह आयोजना गर्दै ती चोरबारे खुलाइएको थियो । बैंक चोरी गर्न नाम नखुलाइएका ती दुई दाजुभाइले डोनाल्ड ट्रम्पको मास्क लगाउने काइदा प्रयोग गरे पनि उनीहरु असफल हुन पुगे । उनीहरुले अपनाएको यो तरिका सन् १९९१ को फिल्म…
यि पोर्नस्टारलाई आयो आईएसकोे टाउको छेदाउने धम्की
संसारभर धेरै हेरिने र खोजिने पोर्नस्टारलाई आईएसका सदस्यबाट अनलाइनमा धम्की दिन थालिएको छ । २४ वर्षे पूर्व पोर्नस्टार मिया खलिफाले आफूलाई अनलाइनमा आईएसका मानिसहरुले ज्यान मार्ने धम्की दिएको र टाउको छिनाउने धम्की दिएको बताएकी हुन् । अमेरिकालाई कर्मथलो बनाउँदै लेबनानबाट आएकी मिया केही समय पहिले हिजाब पहिरिएर पोर्न फिल्म खेलेकी थिइन् । मियालाई अनलाइनमा फोटो म्यानुप्लेट गरिएरका तस्बिरहरु पनि आईएसका प्रतिनिधिहरुबाट आइरहेको छन् । ‘उनीहरुले मलाई मार्न नै चाहन्छन्,’ द स्पोर्ट जंकिजसँग मियाले भनेकी छन्, ‘मलाई त यो केही समयमा हराएर जाला भनेको उनीहरु बारम्बार यही कुरा लिएर मलाई पछ्याइरहेका…